वियोगले जन्माएको एक सामाजिक अभियन्ता ‘बिष्णु गौतम’ « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
वियोगले जन्माएको एक सामाजिक अभियन्ता ‘बिष्णु गौतम’
एकाएक आफ्नो मुटुका टुक्राहरुलार्इ गुमाउँदा गौतम परिवार आफुलार्इ संहाल्नै नसक्ने अबस्थामा पुग्यो । जो कोहिले पनि अनुमान गर्न सक्छ कि यो पिडा उहाँहरुको जीवनमा असामान्य थियो । उक्त घटनाहरुको कारण आफ्नो जीवनलाई भोटेकोशीमा फाल हाली सपरिवार देहत्याग गर्ने योजनामा बिष्णु दाजु पुग्नु भयो ! अकस्मात उहाँको दिमागमा मृत्युबरणबाट जो कोहीले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन र यो समस्याको समाधान पनि होइन भन्ने सोच आयो । अत्यन्त नयाँ जोश र दृढ बिश्वासका साथ बाँकी रहेको जीबन सामाजिक सेवामा योगदानदिने बाचाका साथ अगाडी बढ्ने आँट गर्नु भयो ।
मानिस एक सामाजिक प्राणी हो । अनि जीवन संयोगान्त र वियोगान्तको संगालो हो । कहिलेकाही मानिसले आफ्नो जीवन जिउने क्रममा कल्पना नै नगरेको असहज घटनाहरु सहनु पर्दछ । सुख र सन्तुष्टिमा चलिरहेको जीवन कहाँ नेर भत्कन्छ थाहै हुँदैन, जो कोहिको पनि । यसैको ज्वलन्त उदाहरण हुन लक्ष्मी प्रतिष्ठानका पात्रहरु आदरणीय दाजु बिष्णु गौतम र भाउजू लक्ष्मी गौतम ! काठमाडौं तिलगंगा निबासी दाजु बिष्णु गौतम र लक्ष्मी गौतम तिनवटा छोराहरु र एक छोरीका अभिभावक हुनुहुन्थ्यो । त्यती बेलाउहाँहरुको परिबार स्वर्ग जस्तै थियो । आफ्नै ब्याबसायमा संलग्न कर्तव्य निष्ठ अतिनै मिलनसार जेष्ठ सुपुत्र कुमार गौतमको अचानक मोटर साइकल दुर्घटनामा परि असामयिक निधन भयो । यस दुःखद घटनाले स्वर्ग जस्तो परिबारमा ठुलो वियोगान्त र बज्रपातले शोकाकुल बन्यो र यस परिवारले आफुहरुलार्इ जसरी तसरी संहाल्न पुग्यो । बिधाताको नियति नै यस्तो भएपछि कस्को के लाग्छ र !
पुरानो घाउमा मलम लगाउन नपाउँदै केही महिनाको अन्तरालमा श्रृङ्खला बद्ध रुपमा अर्को दुःखद घटना घटयो । अध्ययनको शिलशिलामा अमेरिकामा रहेका अत्यन्त जेहन्दार माइला छोरा बलराम गौतमको हरिणलाई जोगाउने क्रममा कार दुर्घटना भएको खबरले पुन उहाँको परिवार शोकाकुल बन्यो । यसरी एकाएक आफ्नो मुटुका टुक्राहरुलार्इ गुमाउँदा गौतम परिवार आफुलार्इ संहाल्नै नसक्ने अबस्थामा पुग्यो । जो कोहिले पनि अनुमान गर्न सक्छ कि यो पिडा उहाँहरुको जीवनमा असामान्य थियो । उक्त घटनाहरुको कारण आफ्नो जीवनलाई भोटेकोशीमा फाल हाली सपरिवार देहत्याग गर्ने योजनामा बिष्णु दाजु पुग्नु भयो ! अकस्मात उहाँको दिमागमा मृत्युबरणबाट जो कोहीले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन र यो समस्याको समाधान पनि होइन भन्ने सोच आयो । अत्यन्त नयाँ जोश र दृढ बिश्वासका साथ बाँकी रहेको जीबन सामाजिक सेवामा योगदानदिने बाचाका साथ अगाडी बढ्ने आँट गर्नु भयो । यसैक्रममा बिष्णु दाजुले राजनैतिक सोच भन्दा टाढा रहेर परोपकारी संस्था लक्ष्मी प्रतिष्ठानको स्थापन गर्नु भयो । यो संस्थाको उदेश्य मुलत महिला सशक्तिकरण, रोड सेफ्टी, बालबालिकालाई शिक्षा स्वास्थमा पहुँच, खाने पानी बितरण आदि रहेका छन् । जब लक्ष्मी प्रतिष्ठानको स्थापन भयो अनि सामाजिक कामहरु अगाडी बढदै गए । त्यही समयमा दाजुले चितवनको दुर्गम गाउँ कान्दा भन्ने ठाँउमा खाद्यान्नको अभावमा जंगली च्याउ खादा एकै परिवारका सबै सदस्यहरुको मृत्युको खबर छापामा आयो । त्यस पछि उहाँ चितवनको दुर्गम गाउँ कान्दा जहाँ मितेरी फाउन्डेसनको सहयोगमा उक्त घटना घटेको स्थानमा पुग्नु भयो ।
वास्तवमा त्यो कान्दा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी आदिबाट बन्चित दुर्गम चेपाङ बस्ती थियो । बिद्यालय उमेरका बच्चाहरु धेरै भएता पनि थोरैमात्र बालबालिकाहरु करिव चार घन्टाको पैदल यात्र गरी बिद्यालय पुग्थे । उनीहरुको खाद्यान्न जङली च्याउ, गिठा भ्याकुरमा सिमित थियो ।उनीहरुको जीवन चरम गरिबी र अभावमा गुज्रिएको थियो । मानिसले मानिसको लागि सेवा गर्नु नै मुल धर्म हो भन्ने मान्यताका साथ उहाँ उक्त दुर्गम बस्तिलार्इ सुगम बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर आफ्नो संथा मार्फत अगाडी बढनु भयो । भगवानले तँ आँट म पुर्याउछु भने जस्तै, देश बिदेशमा रहेका सहयोगी हातहरुको सहयातले गरिबी निवारण गर्न खाद्यान्न आपूर्ति शिक्षामा बालबालिकाको पहुँचको लागि छात्रवास निर्माण, खेलमैदान, पुस्तकालय र लक्षित बर्गहरुको लागि करिब १०२ घर धुरी निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडी ल्याइयो । हाल ६३ घरहरु निर्माण भैसकेका छ्न भने ३९ वटा घरहरु निर्माण क्रममा छ्न । विभिन्न देश बिदेशमा रहनु भएका महानुभावहरुको सहयोगको कारणले गर्दा लक्षित बर्गका बालबालिकाहरु कुमार बलराम स्मृति छात्रबासमा १६३ जना बालबालिकाहरुलाई खान, बस्न र अध्ययनको लागि निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ । बिद्यालय हाता भित्र रहेको उपयुुक्त खेल मैदानमा जुडो कराते जस्ता विभिन्न खेलहरु खेलिराखेका छ्न ।
यो संथाले साथिका लागि साथी भन्ने कार्यक्रम पनि ल्यएको छ । उक्त बस्तिलार्इ आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नको लागि कृषि, पशुपालनमा प्रोत्साहन, आन्तरिक र बाहय पर्यटनको प्रबर्द्धन तर्फ लक्ष्मी प्रतिष्ठान अगाडी बढदै छ । दुई वर्ष अगाडी नेपालमा आएको बिनासकारी भुकम्पमा पनि काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा यस संस्थाले अतुलनीय योगदान गरेको छ । आफू असहनिय घटनाले बिचलित हुँदा पनि आफ्ना पिडाहरुलार्इ थाती राखेर सामाजिक सेवामा अहोरात्र खटिरहने लक्ष्मी प्रतिष्ठान प्रति म ह्र्दयदेखि नमन गर्द्छु। यस्ता महान अभियान्ता र संस्था माथी राज्यको नजर पुगेको छ वा छैन यस बारे म अनबभिज्ञ छु । यदि राज्यको नजर पुगेको छैन भने पुर्याउन अनुरोध गर्दै प्रोत्साहन गरिदिन अनुरोध गर्दछु । जस्ले गर्दा आगामी दिनहरुमा समाज सेवामा योगदान पुर्याउने सघ संस्था र ब्यक्तिहरुमा अझ बढी समाजलाई योगदान गर्ने थप उर्जा थपियोस ।स्वयं लक्ष्मि प्रतिष्ठानका संस्थापक दाजु आर्थिक साथै अन्य सहयोगहरु जुटाउनको निम्ति कहिले बेलायत कहिले अमेरिका र अन्य मुलुकहरू भ्रमण गरिरहनु भएको छ । अन्त्यमा देश अथवा बिदेशमा विभिन्न पेसा र ब्यवसाय गरेर बस्नुहुने महानुभावहरुलार्इ हरेक क्षेत्रबाट उक्त लक्ष्मी प्रतिष्ठानलाई सहयोग गरि प्रतिष्ठानले राखेका उद्देश्यहरु सफल पारी दिनहुन अनुरोध गर्द्छु ।
प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०७४
दोहोरो आवेदनका कारण तामाकोशीको आइपिओ बाँडफाँड पर धकेलियो
सामुदायिक लघुवित्तको ३ लाख कित्ता आइपीओ आजदेखि, कति पाईन्छ भर्न…
मध्य भोटेकोशीको आइपीओ आजदेखि, कसले कति कित्ता पाउँछ भर्न ?
चिसो बढेसँगै चिसियो सेयर बजार, नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी
काठमाडौं । एउटै व्यक्तिले दोहोरो आवेदन दिएका कारण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनको आइपिओ बाँडफाँड पर
काठमाडौं । चिसो बढेसँगै सेयर बजार पनि खुम्चिदै गएको छ । सेयर बजार मापक नेप्सेसँगै
ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रकाश दाहाल मिलनसार र व्यवहारिक युवा भएको बताउनुभएको छ
मेगा क्यापिटल मार्केट्सलाई धितोपत्र बोर्डको सैद्दान्तिक सहमति
काठमाडौँ । मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यावसाय गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सैद्दान्तिक सहमति
सामुदायिक लघुवित्तको ३ लाख कित्ता आइपीओ आजदेखि, कति पाईन्छ भर्न ?
काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्तले आजदेखि ३ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर ९आईपिओ० निष्काशन गरेको छ